Sawirro: Kulan looga hadlayay amniga Muqdisho oo uu shir gudoomiyay gudoomiyaha gobolka Banaadir
arlaadi May 13, 2017 No Comments
Kulankan oo ka dhacay Aqalka Dowlada Hoose ee Xamar ayaa ujeedkiisu waxa uu ahaay sidii laamaha Amiga Qaranka iyo Ciidanka AMISOM ay u xoojin lahaayeen Amniga Caasimada.
Kulankan oo ay kasoo qeyb galeen Taliyaha Ciidanka Xooga Dalka Sareeye Gaas Axmed Jimcaale Geedi, Taliyaha Ciidanka Nabad ilaalinta AMISOM iyo Taliya Qeybta Guud Gobalka Banaadir ee Ciidanka Boliiska Soomaliyeed ayaa Waxaa shir gudoominaaye Gudoomiyaha Gobalka Banaadir Ahna Duqa Magaalada Muqdisho Taabit Cabdi Maxamed.
Inta uu kulanka socday ayaa Duqa Magaalada Muqdisho waxa uu saraakiisha uu la kulmay kala hadlay in ay laba laabaan sugida amniga iyo in ay garab siiyan Gudiga golaha Amniga Gobalka Banaadir oo dhawaan la magacaabay si loo sugo Xasiloonida Magaalada Muqdisho maadaama ay fooda nagu soo heyso Bisha Barakeysan ee Ramadaanka.
Taliyaha Ciidanka Nabad ilaalinta Amissom ee Soomaaliya Cismaan Nuur Subagle oo kulanka kadib la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in AMISOM ay u taagan tahay Xasiloonida Soomaaliya.
Gudoomiyaha Gobalka Banaadir Ahna Duqa Magaalada Muqdisho Taabit Cabdi Maxamed ayaa dhankiisa tilmaamay in saraakiisha uu la kulmay ay isku afgarteen sidii gacan adag looga geysan lahaa amniga Gobalka Banaadir.
Duqa Magaalada Muqdisho ayaa dhawaan magacaabay Gudiga golaha Amniga Gobalka Banaadir oo ay ku mideysan yihiin Ciidamada Qalabka sida kuwaas oo door ka qaadan doona xoojinta Xasiloonida Caasimada.